दाङको उपनिर्वाचनमा १६ उम्मेदवारको जमानत जफत
दाङ । दाङमा भएको उपनिर्वाचनमा १६ जनाको जमानत जफत भएको छ । क्षेत्र नं ३ को प्रदेशसभा २ का १२ र घोराही उपमहानगरपालिका–१६ का चारजना उम्मेदवारको जमानत जफत भएको हो । विस्तृतमा
इन्सेक भन्छ : उपनिर्वाचनमा आचारसहिंता उल्लङ्घनका ३३ वटा घटना
‘हिन्दू धर्मले देशमा विकास हुन दिएन’
काठमाडौं । पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले हिन्दू धर्मका कारण नेपालमा विकासले गति लिन नसकेको तर्क गरेका छन् । उनले धार्मिक सँस्कृतिको रुपमा रहेको हिन्दू धर्मको बर्चश्वलाई निस्तेज नपारेसम्म मुलुक समृद्धिको दिशामा अघि बढ्न नसक्ने तर्क गरेका हुन् । ‘नेपालको धार्मिक संस्कृति विकास र समृद्धिको बाधक नै हिन्दू धर्म हो ।’ उनले भने, ‘अहिलेको नेपालको धार्मिक संस्कृति हिन्दू परम्परालाई परिवर्तन नगर्दासम्म समृद्धि हासिल हुन सक्दैन ।’
नेकपामा दुर्इ लाख कार्यकर्ता बेराेजगार, दुर्इ महिनापछि तीन लाखले अवसर पाउने
काठमाण्डौ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले सांगठनिक संरचना टुंगो नलगाउँदा करिब तीन लाख नेता–कार्यकर्ता बेरोजगार बनेको अनुमान गरिएको छ । पार्टी एकता पश्चात् नेकपाले अहिले पनि केन्द्रीय समिति बाहेकको कमिटीमा रहने सदस्यको संख्या टुंगो लगाएको छैन । जसले गर्दा अहिले देखशभरी नै नेकपाका कार्यकर्ताहरू बेरोजगार बनेका हुन् । यो टुंगो लाग्न अझै २ महिना लाग्ने बताइएको छ ।
नेकपाकाे दुवै शक्तिशाली संगठनमा पूर्वमाअाेवादीकाे दाबी, पूर्वएमालेका नेताहरू अापसी कलहमै
काठमाणै । नेकपाका बलियो दुई संगठनमध्ये विद्यार्थी र युवा संगठन हुन् । नेकपाका पूर्वमाओवादी र पूर्व एमालेले एक/एकवटा संगठन लिने भन्नेमा सहमति थियो । तर अहिले ती दुवै संगठनमा पूर्वमाओवादीहरूको दाबी छ । वर्षमान पुनको खास मान्छे भनेर चिनिएका पूर्वमाओवादीनिकट विद्यार्थी संगठनका अध्यक्ष रञ्जित तामाङले यस्तो दाबी गरेका हुन् । उनको दाबीमा माओवादीतर्फका कार्यदलका हितमान शाक्य सकारात्मक हुनैपर्ने अवस्था छ भने अहिले जनजातिको आवरण र तामाङ समुदायको भएकोले नविना लामा पनि रञ्जितको पक्षमा लागेको स्रोतको दाबी छ ।
प्रचण्डले 'बेमाैसमी राग' उरालेकाे केपी अाेलीकाे ठहर
काठमाण्डौ । नयाँ नयाँ एजेण्डा उठाएर राष्ट्रि राजनीति र पार्टी नेतृत्वको केन्द्रमा बसिरहन सिपालु प्रचण्डले केही समयत यता राजनीतिको शान्त तलाउमा ढुंगा हानेर तरंग फिँजाएका छन् ।
प्रदेश नं. ४ काे बैठकमा प्रतिपक्षी काँग्रेसमाथि यसकारण लगाइयाे मार्शल
पोखरा । प्रदेश नं ४ को हिजो बसेको प्रदेशसभा बैठक प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले अवरोध गरेपछि मार्सल लगाएर सञ्चालन गरिएको छ । प्रदेशसभामा पहिले टेबुल भएका विधेयक र प्रस्ताव पहिले नै छलफल गरी टुंग्याउनुपर्ने मागसहित काँग्रेसले सभा अवरोध गरेपछि दुई पटकसम्म स्थगित गरिएको बैठक तेस्रो पटक भने मार्सल लगाएर सञ्चालन गरिएको हो ।
राष्ट्रियसभा सदस्यको पदावधि निर्धारण ४ गते गरिने
काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाका ५९ जना सदस्यको पदावधि निर्धारणका लागि असार ४ गते गोलाप्रथाको प्रयोग हुने भएको छ ।
काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकले ‘राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ को परिमार्जित मस्यौदा प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवनमा आज बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकले उक्त नियमावली पारित गरेको हो ।
मधेशवादी दलको अस्पष्टताले अन्तरविरोधको अवस्था
जनकपुरधाम । प्रदेश नं २ को नामकरण र कामकाजको भाषाका सम्बन्धमा मधेशवादी दलको अस्पष्टताले अन्तरविरोधको अवस्था सिर्जना भएको धारणा व्यक्त गरिएको छ । निर्वाचनका बेला मैथिली र भोजपुरीमा मत माग्ने तर विजयी भएपछि दुवै भाषाको विरोधमा उभिने मधेशवादी दलका जनप्रतिनिधिको क्रियाकलापले प्रदेशको नामकरण र प्रदेशको कामकाजको भाषा घोषणामा ढिलो भएको आरोप लगाइएको छ ।
गरिबी नेपालीको साझा समस्या होः मुख्यमन्त्री गुरुङ
पोखरा । प्रदेश नं ४ का मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले गरिबी हामीहरूको साझा समस्या भएको बताएका छन् । गरिबी निवारण कोषद्वारा आज यहाँ आयोजित ‘गरिबी निवारण, व्यावसायिकता विकास तथा समृद्धिका लागि स्थानीय सरकारहरूसँग प्रदेशस्तरीय अन्तक्र्रिया’ विषयक कार्यक्रमको उद्घाटन समारोहमा उनले गरिबीलाई जरैदेखि उन्मूलन गर्नु आवश्यक भएको बताए ।
शान्ति सुरक्षा सकारात्मक दिशामा अगाडि बढेको गृहमन्त्री थापाको भनाई
काठमाडौँ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सरकारले शान्ति सुरक्षा, स्थायित्वसहित समृद्धिका लागि सकारात्मक रुपमा अघि बढाएकाले जनतामा आशा जगाएको बताएका छन् । राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा समसामयिक विषयमा बोल्दै गृहमन्त्री थापाले सामाजिक अपराधलाई सामाजिक विभेदको अन्त्य गर्दै समृद्धिको बाधकका रुपमा रहेका कुसंस्कार र सामाजिक अपराध नियन्त्रणको कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउँदै लगिएको बताए ।